सुविधाहरू प्रत्येक सामग्री व्यवस्थापन प्रणाली खोजी ईन्जिन अनुकूलन को लागी हुनु पर्छ Martech Zone
मैले एक ग्राहकलाई भेटें जो उनीहरूको खोज इञ्जिन श्रेणीकरणसँग संघर्ष गर्दै थिए। मैले समीक्षा गरे पछि सामग्री व्यवस्थापन प्रणाली (CMS), मैले केहि आधारभूत उत्तम अभ्यासहरू खोजे जुन मैले फेला पार्न सकेन। तपाईंको CMS प्रदायकसँग प्रमाणीकरण गर्नको लागि मैले चेकलिस्ट प्रदान गर्नु अघि, मैले पहिले यो कुरा बुझ्नु पर्छ कि कम्पनीमा अब सामग्री व्यवस्थापन प्रणाली नहुनु पर्ने कुनै कारण छैन।
CMS ले तपाइँ वा तपाइँको मार्केटिंग टीम प्रदान गर्दछ उडानमा तपाइँको वेब विकासकर्ताको आवाश्यकता बिना तपाइँको साइट परिवर्तन गर्न। अर्को कारण किन सामग्री व्यवस्थापन प्रणाली एक आवश्यकता हो जुन प्राय: तपाईंको साइटलाई अनुकूलन गर्नको लागि उत्तम अभ्यासहरू स्वचालित हुन्छ।
एसईओ प्युरिस्टहरू मैले यहाँ छलफल गरेका केहि सुविधाहरूका साथ बहस गर्न सक्दछन् किनकि तिनीहरू सिधा रैंकिंगमा श्रेय नदिन सक्छ। म कुनै पनि खोज इञ्जिन गुरुसँग तर्क गर्छु, जे होस्, त्यो खोज इञ्जिन रैंकिंग प्रयोगकर्ता अनुभवको बारे हो - खोजी ईन्जिन एल्गोरिदम होइन। राम्रो तपाईं आफ्नो साइट डिजाइन, ठूलो सामग्री मा लगानी, त्यो सामग्री प्रचार, र तपाइँको प्रयोगकर्ताहरु संग संलग्न ... राम्रो तपाइँको साइट जैविक खोज रैंकिंग मा प्रदर्शन गर्दछ।
को यांत्रिकी कसरी खोजी ईन्जिन क्रलरले फेला पार्दछ, अनुक्रमणिका, र श्रेणीs तपाईंको साइट धेरै बर्ष मा बदलिएको छैन ... तर आगन्तुकहरु लाई आकर्षित गर्न को क्षमता, ती आगन्तुकहरु तपाइँको सामग्री साझा छ, र खोज इन्जिन प्रतिक्रिया प्रदर्शन परिवर्तन भएको छ। राम्रो एसईओ छ उत्तम प्रयोगकर्ता अनुभव... र सामग्री व्यवस्थापन प्रणाली तपाईंको सफलताको लागि महत्वपूर्ण छ।
सामग्री व्यवस्थापन SEO सुविधाहरू
हरेक सामग्री व्यवस्थापन प्रणाली हुनुपर्दछ वा निम्न सुविधाहरूसँग कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ:
ब्याकअप: ब्याकअप र SEO? ठिक छ ... यदि तपाईंले आफ्नो साइट र सामग्री गुमाउनुभयो भने, श्रेणीकरण गर्न यो धेरै गाह्रो छ। वृद्धिशील ब्याकअपको साथमा मांगको साथ एक ठोस बैकअप भएको, अफ-साइट ब्याकअप र पुनर्स्थापनाहरू अत्यन्त उपयोगी छन्।
ब्रेडक्रमहरू: यदि तपाईं क्रमशः व्यवस्थित रूपमा धेरै जानकारी प्राप्त गर्नुभयो भने, प्रयोगकर्ताहरूको (र खोजी ईन्जिनहरू) को क्षमता बुझ्न कि पदानुक्रम महत्वपूर्ण छ कि उनीहरू कसरी तपाईंको सामग्री हेर्छन् र यसलाई सूचिकृत गर्छन्।
ब्राउजर सूचनाहरू: क्रोम र सफारीले अब अपरेटि with प्रणालीहरूको साथ एकीकृत सूचनाहरू प्रस्ताव गर्दछ। जब कोही तपाइँको साइट मा अवतरण गर्दछ, तिनीहरु लाई सोधिन्छ यदि तिनीहरु लाई सूचित गर्न चाहानुहुन्छ जब सामग्री अद्यावधिक हुन्छ। सूचनाहरूले आगंतुकहरूलाई फर्केर राख्छन्!
क्याचिंग: प्रत्येक पटक पृष्ठ अनुरोध गरीएको बेला, डाटाबेस खोजीले सामग्री समातेर पृष्ठलाई सँगै राख्दछ। यसले स्रोतहरू र समय लिन्छ ... समयले तपाईंको खोजी ईन्जिन अनुकूलनमा चोट पुर्‍याउँछ। क्यासिंग क्षमताहरूको साथ CMS वा होस्ट प्राप्त गर्नु तपाईंको साइटको गति बढाउनको लागि र तपाईंको सर्वरमा आवश्यक संसाधनहरू कम गर्न महत्वपूर्ण छ। क्याचिंगले तपाईंलाई मद्दत गर्न सक्दछ जब तपाईं ट्राफिकको हमला गर्नुहुन्छ ... क्यास पृष्ठहरू अनचेड पृष्ठहरू भन्दा रेन्डर गर्न सजिलो हुन्छ। त्यसोभए तपाईं क्यास नगरीकन धेरै विजिटरहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
क्यानोनिकल यूआरएलहरू: कहिलेकाँही साइटहरू एकल पृष्ठका साथ धेरै मार्गहरू सहित प्रकाशित हुन्छन्। एउटा साधारण उदाहरण तपाईको डोमेनमा हुन सक्छ http://yourdomain.com or http://yourdomain.com/default.aspx। एउटै पृष्ठमा यी दुई पथहरूले आगमन लिंकको वजन विभाजन गर्न सक्दछ जहाँ तपाईंको पृष्ठ स्थान छैन र यो जस्तो पनि हुन सक्छ। क्यानोनिकल यूआरएल HTML कोडको लुकेको टुक्रा हो जसले खोज इञ्जिनहरूलाई बताउँदछ जुन कुन URL मा लि applying्क लागू गर्नुपर्दछ।
टिप्पणी: टिप्पणीहरूले तपाईंको सामग्रीमा मूल्य थप गर्दछ। केवल यकिन गर्नुहोस् कि तपाईं टिप्पणीहरूलाई मध्यम गर्न सक्नुहुनेछ किनकि त्यहाँ लिंकहरू उत्पन्न गर्न कोशिस गर्ने CMS प्लेटफार्महरूमा स्प्यामिंग CMS प्लेटफर्महरू छन्।
सामग्री सम्पादक: एक सामग्री सम्पादक जसले H1, H2, H3, मजबूत र इटालिकलाई पाठको वरिपरि लपेट्न अनुमति दिन्छ। छवि सम्पादनले ALT तत्वहरूलाई परिमार्जन गर्न अनुमति दिनुपर्दछ। एch्कर ट्याग सम्पादनले TITLE तत्व सम्पादनको लागि अनुमति दिनुपर्दछ। दुर्भाग्यवस कति सीएमएस प्रणालीहरू नराम्रो सामग्री सम्पादकहरू छन्!
सामग्री वितरण नेटवर्क: ए सामग्री वितरण नेटवर्क कम्प्युटरहरूको एक नेटवर्क हो जुन भौगोलिक रूपमा स्थित छ जुन स्थानीय संसाधनहरू स्थानीय रूपमा भण्डार गर्दछ ... पृष्ठहरूलाई अधिक द्रुत लोड गर्न अनुमति दिदै। साथै, जब एक CDN कार्यान्वयन हुन्छ, तपाईंको पृष्ठ अनुरोधहरूले तपाईंको वेब सर्भर र तपाईंको CDN एकै समयमा सम्पत्तिहरू लोड गर्न सक्दछ। यसले तपाइँको वेब सर्भरमा लोड कम गर्दछ र तपाइँको पृष्ठहरूको गतिलाई बृद्धि गर्दछ।
उच्च प्रदर्शन होस्टिंग: जब खोजी ईन्जिनहरूको लागि आउँदछ गति सब कुरा हो। यदि तपाईं होस्टिंगमा केहि पैसा बचत गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईं पूर्ण रूपमा इन्डेक्स गर्ने र खोज ईन्जिनमा राम्रो क्रममा राख्ने तपाईंको क्षमतालाई नष्ट गर्दै हुनुहुन्छ।
छवि कम्प्रेसन: छविहरू प्राय: अनावश्यक ठूला फाईलहरूमा निर्यात हुन्छन्। इमेज कम्प्रेसन उपकरणसँग एकीकरण गर्दा फाईल आकार घटाउन छविहरू इष्टतम हेर्नका लागि रिसाइज गर्न महत्वपूर्ण छ।
एकीकरण: नेतृत्व सामग्री, ईमेल मार्केटिंग, मार्केटि auto स्वचालन, सामाजिक मिडिया मार्केटि,, र अन्य प्लेटफर्महरू जुन तपाईं ट्राफिक प्राप्त गर्न र कायम राख्न मद्दत गर्नुहुन्छ तपाईंको सामग्रीको कार्यक्षमता विस्तार गर्न क्षमता।
सुस्त लोडिंग छविहरू: खोज ईन्जिनहरूले धेरै मिडियाको साथ लामो सामग्री मन पराउँछन्। तर छविहरू लोड गर्नाले तपाईंको साइटलाई क्रलमा ढिलो गर्न सक्दछ। पृष्ठ स्क्रोल भइरहेको बेला आलस्य लोडिंग छविहरू लोड गर्ने एक साधन हो। यसले पृष्ठलाई धेरै छिटो लोड गर्न अनुमति दिन्छ, त्यसपछि छविहरू मात्र प्रदर्शन गर्दछ जब प्रयोगकर्ताले यसको स्थानमा पुग्दछ।
नेतृत्व प्रबन्धन: सम्भाव्यहरूले तपाईंको लेख फेला पारे पछि, कसरी तिनीहरू तपाईंसँग कुराकानी गर्छन्? लीडहरू क्याप्चर गर्न फारम डिजाइनरहरू र डाटाबेसहरू हुनु आवश्यक छ।
मेटा विवरण: खोजी ईन्जिनहरूले सामान्यतया पृष्ठको मेटा विवरण क्याप्चर गर्दछन् र सर्च ईन्जिन नतीजा पृष्ठमा शीर्षक र लिंक अन्तर्गत देखाउँदछ। जब कुनै मेटा विवरण अवस्थित हुँदैन, खोजी ईन्जिनहरूले पृष्ठबाट अनियमित पाठ लिन्छन् ... अभ्यास जुन तपाईंको ईन्जिनहरूमा लिंकमा तपाईंको क्लिक-थोरै दरहरू कम गर्दछ र तपाईंको पृष्ठको अनुक्रमणिकामा चोट पुर्‍याउन सक्छ। तपाईंको CMS ले तपाईंलाई साइटको प्रत्येक र प्रत्येक पृष्ठमा मेटा विवरण सम्पादन गर्न अनुमति दिनुपर्दछ।
मोबाइल: मोबाइल खोजी प्रयोगमा विस्फोट हुँदैछ किनकि स्मार्टफोन र ट्याब्लेटहरू भर पारिन्छ। यदि तपाईंको CMS ले HTML5 र CSS3 (उत्तम विकल्प) को उपयोग गरेर प्रतिक्रियाशील वेबसाइटलाई अनुमति दिँदैन ... वा कम्तिमा राम्रोसँग अनुकूलित मोबाइल टेम्प्लेटमा पुनर्निर्देशित हुन्छ भने, तपाईंलाई मोबाइल खोजहरूको लागि श्रेणीकृत गरिने छैन। थप रूपमा, नयाँ मोबाइल स्वरूपहरू मनपर्दछ एएमपी गुगल सामग्रीबाट बनाइएको खोजीहरूको लागि तपाईंको सामग्री राम्रोसँग राख्न सकिन्छ।
पिंगहरू: जब तपाईं आफ्नो सामग्री प्रकाशित गर्नुहुन्छ, CMS स्वचालित रूपमा गुगल र बिंगमा तपाईंको साइट सबमिट गर्नुपर्छ कुनै हस्तक्षेप बिना। यो खोज ईन्जिनबाट एक क्रॉल आरम्भ हुनेछ र तपाईंको नयाँ (वा सम्पादित) सामग्री खोजी ईन्जिनले reindexed प्राप्त गर्दछ। परिष्कृत सीएमएस ईन्जिनले अनुसूची सामग्रीमा खोजी ईन्जिनहरूलाई पनि पिंग गर्ने छ।
पुन: निर्देशित गर्दछ: कम्पनीहरूले प्राय: परिवर्तन गर्दछ र आफ्नो साइटहरूको पुन: संरचना गर्दछ। यसको साथ समस्या यो छ कि खोज इञ्जिनले अझै पनी एक URL मा अवस्थित हुन सक्छ जुन अवस्थित छैन। तपाईंको CMS ले तपाईंलाई नयाँ पृष्ठमा ट्राफिकलाई सन्दर्भित गर्न र त्यहाँ खोज इञ्जिनलाई पुनःनिर्देशित गर्न अनुमति दिनुपर्दछ ताकि उनीहरूले नयाँ पृष्ठ फेला पार्नेछन् र अनुक्रमणिका गर्न सक्दछन्।
रिच स्निपेट्स: खोज ईन्जिनहरूले तपाइँको साइट भित्र पेजिनेसन र ब्रेडक्रम्ब पहिचानको लागि माइक्रोडाटा ढाँचाहरू प्रस्ताव गर्दछ। प्राय: यो मार्कअप विषयवस्तु भित्र लागू गर्न आवश्यक पर्दछ जुन तपाईं आफ्नो CMS मार्फत तैनाथ गर्दै हुनुहुन्छ वा मोड्युलहरू फेला पार्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईंलाई सजीलो कार्यान्वयन गर्न अनुमति दिन्छ। रिच स्निपेट्स जस्तै गुगलका लागि स्किमा र फेसबुकका लागि ओपनग्राफ खोजी ईन्जिन नतीजाहरू र साझेदारी बढाउछ र क्लिक गर्न अधिक आगन्तुकहरूलाई ड्राइभ गर्दछ।
रोबोट.txt: यदि तपाइँ तपाइँको डोमेनको मूल (आधार ठेगाना) मा जानुहुन्छ भने, थप्नुहोस् robots.txt ठेगानामा। उदाहरण: http://yourdomain.com/robots.txt त्यहाँ फाईल छ? एक robots.txt फाईल आधारभूत अनुमति फाईल हो जसले खोज ईन्जिन बोट / स्पाइडर / क्रलरलाई कुन निर्देशिकाहरू बेवास्ता गर्ने र कुन निर्देशिकाहरू क्रल गर्न बताउँदछ। थप रूपमा, तपाईं यसमा तपाईंको साइटम्यापमा लिंक थप्न सक्नुहुन्छ!
RSS फिडहरू: यदि तपाईंसँग अन्य गुणहरू छन् र तपाईंको ब्लग प्रचार गर्न चाहनुहुन्छ भने, RSS फिडहरू सजिलैसँग बाह्य साइटहरूमा उद्धरणहरू वा शीर्षकहरू प्रकाशित गर्न फिडहरू हुनु आवश्यक हो।
खोज: आन्तरिक रूपमा खोजी गर्न र सान्दर्भिक परिणामहरू प्रदर्शन गर्ने क्षमता प्रयोगकर्ताहरूलाई उनीहरूले खोजिरहेका जानकारीहरू फेला पार्न आवश्यक छ। खोज इञ्जिन परिणाम पृष्ठहरूले प्राय: खोजी उपयोगकर्ताहरूलाई साइट भित्र खोजी गर्न माध्यमिक क्षेत्र प्रदान गर्दछ!
सुरक्षा: ठोस सुरक्षा मोडेल र सुरक्षित होस्टिंगले तपाईंको साइटलाई आक्रमण गर्न वा यसमा मालिसियस कोड राख्नुबाट बचाउँछ। यदि तपाईंको साइट यसमा मालिसियस कोड प्राप्त गर्दछ भने, गुगल तपाईंलाई डी-अनुक्रमणिका गर्दछ र तपाईंलाई वेबमास्टरहरू विरूद्ध सूचित गर्दछ। यो अत्यावश्यक छ कि तपाईंसँग केही दिनको अनुगमन वा सुरक्षा सुविधाहरू तपाईंको सीएमएसमा वा तपाईंको होस्टिंग प्याकेजमा एकीकृत छ।
सामाजिक प्रकाशन: अनुकूलित शीर्षक र छविहरूको साथ तपाईंको सामग्री स्वतः प्रकाशित गर्ने क्षमताले तपाईंको सामग्री साझेदारी गर्दछ। साझेदारी गरिएको सामग्रीले तपाईंको सामग्रीको उल्लेख गर्न अग्रसर गर्दछ। लि links्कहरूको लागि नेतृत्व उल्लेख गर्नुहोस्। र लि ranking्क क्रमबद्ध गर्न नेतृत्व। फेसबुकले तत्काल लेखहरू पनि सुरू गरिरहेको छ, तपाईको ब्रान्डको पृष्ठहरूमा सिधा लेख प्रकाशित गर्नका लागि यो ढाँचा।
सिन्डिकेशन: जबकि आरएसएस पाठकहरूमा पोष्टहरू पढ्ने व्यक्ति सामाजिक साझेदारीको सट्टामा धेरै हदसम्म गिरावट आएको छ, साईटहरू र उपकरणहरूमा तपाईंको सामग्री सिन्डिकेट गर्ने क्षमता अझै महत्वपूर्ण छ।
ट्यागिंग: खोज ईन्जिनहरूले मुख्य रूपमा कुञ्जीशब्दहरूको लागि मेटा ट्यागलाई वेवास्ता गर्दछ, तर ट्यागि still अझै पनी उपयोगी हुन सक्दछ - यदि केहि शब्दहरू दिमागमा राख्दैनौं कि तपाईंले प्रत्येक पृष्ठको साथ लक्षित गर्दै हुनुहुन्छ। ट्यागहरूले प्राय: खोजी गर्दछ र तपाइँको साइट भित्र प्रासंगिक पोष्टहरू र खोज परिणामहरू प्रदर्शन गर्न मद्दत गर्दछ।
टेम्पलेट सम्पादक: एक मजबूत टेम्प्लेट सम्पादक जसले HTML तालिकाको कुनै प्रयोगलाई बेवास्ता गर्दछ र पृष्ठलाई राम्रोसँग ढाँचा गर्नको लागि राम्रो सफा एचटीएमएल र संलग्न फाईल CSS को लागि अनुमति दिन्छ। तपाइँ कुनै सामग्री बिना नै तपाइँको सामग्री कायम राख्दै तपाइँको साइटमा कुनै महत्वपूर्ण विकास नगरी टेम्प्लेटहरू फेला पार्न र स्थापना गर्न सक्षम हुनुपर्दछ।
एक्सएमएल साइटमैप: गतिशील रूपमा उत्पन्न गरिएको साइटम्याप एक कुञ्जी घटक हो जुन सर्च इन्जिनहरू प्रदान गर्दछaनक्सा जहाँ तपाईंको सामग्री छ, यो कत्तिको महत्त्वपूर्ण छ, र कहिले अन्तिम परिवर्तन भयो। यदि तपाईंसँग ठूलो साईट छ भने, तपाईंको साइटम्याप्स कम्प्रेस गरिएको हुनुपर्दछ। यदि साइटम्याप १ एमबी भन्दा बढि छ भने, तपाईंको सीएमएसले बहु साईटम्यापहरू उत्पन्न गर्नुपर्दछ र तिनीहरूलाई शृंखलाबद्ध गराउनुपर्दछ ताकि खोज इन्जिनले तिनीहरू सबै पढ्न सक्दछ।
म यहाँ एउटा अंगमा बाहिर जान्छु र भन्छु; यदि तपाईंको एजेन्सीले तपाईंलाई सामग्री अपडेटको लागि चार्ज गरिरहेको छ र तपाईंसँग आफ्नो साइटलाई अनुकूलन गर्न सामग्री व्यवस्थापन प्रणालीमा पहुँच छैन भने ... यो एजेन्सी छोड्ने र तपाइँसँग ठोससँग नयाँ फेला पार्ने समय भयो। सामग्री व्यवस्थापन प्रणाली। एजेन्सीहरूले कहिलेकाँही जटिल साइटहरू डिजाइन गर्दछन् जुन स्थिर छन् र तपाईंलाई सामग्री परिवर्तनको लागि परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ किनकि तपाईंलाई उनीहरूको आवश्यक पर्दछ ... अस्वीकार्य।
टैग: ampसेमी एसईओमाइक्रोडाटाअमीर स्निपेटहरूrobots.txtखोज इन्जिन अनुकूलनएसईओएसईओ चेकलिस्टSitemapwordpress seoxML साइटम्याप
तपाइँ त्यो शब्द "क्रिएटिभ" प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ ...
के? कुनै विशेष सिफारिसहरू छैनन्? कम्पनीलाई कुन सीएमएस चाहिन्छ वा समाधानको कति बलियो काम गर्छ भनेर कसरी थाहा हुन्छ? राम्रो सूची, श्री Karr।
स्कट आर्मस्ट्रङ एमबीए
मार्स 20, 2011 मा 4: 28 एएम
यो सूची मनपराउनुहोस्! यो अब मेरो दिशानिर्देश हो किनकि म CMS को लागी वरपर किनमेल गर्न थालेको छु। म आफैंले सबै वेब डिजाइनहरू गरिरहेको छु, तर मैले कोड लेख्न खर्च गरेको समय घटाउन चाहन्छु ताकि मैले वेबसाइटको रणनीति बनाउन खर्च गरेको समय बढाउन सकूँ। के तपाईंसँग DIY मुख्यधारा प्रणालीहरू (वर्डप्रेस, जुमला, आदि) मा कुनै सिफारिसहरू छन्?
त्यो URL ले काम गर्दछ, अतिथि। जे होस्, राम्रो CMS ले तपाईंको साइटम्याप पिंग / सबमिट गर्दछ जब तपाईं सामग्री प्रकाशित गर्नुहुन्छ!
मैले यसमा थप्ने मात्र एउटा कुरा भनेको ब्लगिङ प्लेटफर्मले ठीकसँग rel="लेखक" ट्यागहरू प्रदर्शन गर्नुपर्छ र Google प्रोफाइलमा जडानलाई अनुमति दिनुपर्छ ताकि लेखकका छविहरू खोज परिणामहरूमा देखा पर्छन्।
पूर्ण रूपमा सहमत - कुनै पनि कम्पनी CMSless हुनु हुँदैन।